VaTsvangirai Vanosangana neMutungamiri weHurumende yeSweden
Chikumi 16, 2009
Mutungamiri wenyika, VaMorgan Tsvangirai, vaita neChipiri hurukuro nemutungamiri wehurumende yeSweden, VaFredrik Reinfeldt, mukuenderera mberi nerwendo rwavo kunyika dzakabudirira.
VaReinfeldt vaudza vatori venhau kuti pavachatora chigaro chekutungamira European Union kutanga kwemwedzi unouya, vachaona kuti Zimbabwe haisi kuzotyora kodzero dzevanhu zvekare.
Mutungamiri weSweden vatiwo vanoda kuti Zimbabwe itange yavandudza zvinhu munyaya dzehupfumi pamwe nezvematongerwo enyika vasati vaipa mari. Germany yakapa Zimbabwe mari inoita mamiriyoni makumi matatu nemashanu emadhora eku America.
Ukuwo America yakapawo Zimbabwe mari inoita mamiriyoni makumi manomwe nematatu emadhora eku America.
Mari idzi dzinonzi dzichashandiswa mukubatsira vanhuwo zvavo vanotambura muZimbabwe. Zvekupa masangano akazvimirira mari zvapa kuti paite ropa rakaipa pakati paVaTsvangirai nevamwe veZANU-PF. Bepanhau reHerald rinoti VaTsvangirai vave kuzvitsvagira mari sezvo vachidyidzana nemasangano akazvimira.
Nhepfenyuro dzehurumende dzinonzi hadzina kana kuburitsa mifananidzo yemusangano waVaTsvangirai nemutungamiri weAmerica, VaBarack Obama, uyo unonzi nevakawanda wainge wakakosha zvikuru.
Mapepa ehurumende anotiwo VaTsvangirai vakatumwa nemutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, kuti vakuru veZanu-PF vabvisirwe zvirango zvavakatemerwa nenyika dziri kusangana naVaTsvangirai.
Mugwaro rayo kuvatori venhau MDC inoti zviri kutaurwa nemapepa ehurumende ndezvenhando. Vati Zanu-PF ndiyo yega yakazvigokera moto muziso ichitukana nevekune dzimwe nyika. VaTsvangirai mbune vanoti havana kutumwa nemunhu kuita basa ravari kuita, asi kuti vari kuita izvi kuitira kuti vana veZimbabwe vave nehupenyu hwakanaka.
VaTsvangirai vari kuperekwedza nemakurukota matatu anoti gurukota rezvekurongwa kwehupfumi, Va Elton Mangoma, gurukota rezvekushanyirwa kwenyika, VaWalter Mzembi, pamwe negurukota rezvekubatana kweZimbabwe nedzimwe nyika mumatunhu akasiyana siyana, Amai Priscilla Misihairambwi Mushonga.
VaJames Maridadi ndivo mutauriri waVaTsvangirai. Ntungamili Nkomo weStudio7 aita hurukuro naVaMaridadi kuti tinzwe zviri kuitika.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzezve matongerwo enyika dzinoti zviri kuitwa nemapepanhau akaita se Herald nemamwe, zvinoratidza kuti hurumende yemubatanidzwa ichiri zinyekenyeke.
Professor John Makumbe inyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika. Professor Makumbe vaudza Blessing Zulu weStudio7 kuti ZANU-PF haisi kufara nekubudirira kwaVaTsvangirai.